Daawo Fadeexo:- Xildhibaanadii Xilka ka qaaday C/kariin guuleed oo la weeraray. | Curubo.com
Ciidamada maamulka Galmudug ayaa Weerar kusoo qaaday Hool ay ku Shirayeen Xildhibanaadii dhowaan Xilka ka qaaday Madaxwaynaha maamulka Galmudug C.kariim Xuseen Guuleed, Waxaana Madasha ka dhacay Buuq iyadoo ay gudaha usoo galeen Qaar kamid ah Saraakiisha Ciidamadu.
Xildhibaanada oo intaasi kadib Warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay Wado Sharci ah Xilka uga Qaadeen Madaxwaynaha Galmudug, Waxa la isku Haystana ay tahay Sharciga, Sidoo kale waxay ka Jawaab Celiyeen Hadalkii kasoo yeedhay Xubnaha Madasha iyo Beesha Caalamka.
“Qoryo ma wadano, Dhib kale ma Wadno, Warqad ayaanu Kula Xisaab tamaynaa, Dadkii Naftayada Badbaadiyey waanu u mahad Celinaynaa, Sharciga hadii laga Tago Cadaado waan ka tagayaa.” Ayay tidhi mid kamid ah Xildhibaanadu.